Iran Oo Sheegtay In Waxyeelo Wayn Loo Geystay Xarunteeda Niyukliyeerka | Gaaroodi News
Iran Oo Sheegtay In Waxyeelo Wayn Loo Geystay Xarunteeda Niyukliyeerka
April 14, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Iran ayaa sheegtay in weerarka loo geystay xaruntooda Natanz aysan ka hor istaagi doonin hamiga ah in Niyukleer
Kumannaan mashiino ah oo loo isticmaalayay tayaynta qalabka niyukleerka Iraan ayaa la burburiyay ama dhaawac looga gaystay weerar lagu qaaday xarun Niyukleer Axaddii, sida uu sheegay sargaal ka tirsan dowladda Iran.
Alireza Zakani, oo hogaamiyaha xarunta cilmibaaridda baarlamaanka Iran ayaa sheegay in weerarka “uu ciribtiray ” awoodii ay Iran ku fulin lahayd geedi socodka niyukleerka.
Sargaal kale ayaa sheegay in weerarkan uu ka dhacay dhulka hoose ee xarunta ilaa 50 mitir.
Iran ayaa weerarkan ku eedeeysay Israa’iil waxa ay ugu yeertay “fal argagixiso niyukleer “.
Israa’iil ma xaqiijin in ay weerarka ka dambeeyaaan mana aysan beenin.
Balse idaacada Israa’iil oo soo xiganaysa ilo sirdoon ayaa sheegtay in uu ahaa howlgal dhanka internetka ah oo ay fuliyeen sirdoonka Mossad.
Dowladda Iran ayaa sheegtay in ay badali doonto qalabka iyo mashiinada weerarka lagu waxyeeleeyay islmarkana ay ku badly doonto qalab ka sii casrisan oo lagu beekhaamiyo yuuuraaniyamka.
Waxay sidoo kale xukuumadda Iran ay sheegtay in ay beekhaaminta Yuuraaniyamka oo imika ah 20% ay gaarsiin doonaan ilaa 60%.
Labadan heerba waxaa mamnuucaya heshiiskii Iran Lala Galay 2015
Haddii ay gaarsiiyaan beekhaaminta Yuuraaniyamka 60% waxay micnaheedu noqon doontaa in ay u dhawaadeen tayadii loo baahnaa in niyukleer lagu curiyo oo ah 90%.
Dhanka kale warbaahinta Israa’iil iyo Carabta ayaa sheegeysa in Markab ay Israa’iil leeyihiin weerar loogu geystay xeebta imaaraadka.
Saraakiil aan magacyadooda la sheegin ayaa telefishinka Israa’iil ee 12 TV waxay ka soo xigteen in weerarka markabkaasi Hyperion Ray ay Iran ka dambeyso.
Haddii weerarkaasi la xaqiijiyo waxuu noqonayaa mid ka mid ah weeraro is xig-xigay oo loo geystay maraakiib ay leeyihiin Israa’iil iyo Iran.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa horey u sheegay in dalkiisa “uu ka aargudan doono” weerrar lagu soo qaaday xarun dhulka hoostiisa ku taal oo nukliyeerka lagu farsameeyo, arrintaas oo uu ku eedeeyay Israa’iil.
Iran ayaa sheegtay in weerarka loo geystay xaruntooda Natanz aysan ka hor istaagi doonin hamiga ah in Niyukleer ay sameystaan